Gabadh jihaad u tagtay Suuriya oo codsanaysa inay Iswiidhan dib ugu soolaabato – Som Skåne News
Hibo oo ah gabar somaliyed isla markana ka tagtay dalka sweden mudo laga joogo 3 sano ayaa hadda dowlada Iswiidhan ka dalbaneysa in loo ogolaado sidii ay dib ugu soo laaban laheyd wadanka iyada iyo wiil yar oo ay ku dhashay dalka Suuriya.
Hibo iminka waxay kusugantahay xero dadka barakacayaasha ee ku taalla waqooyiga bari ee dalka Suuriya. “Sidaasi waxaa sheegay warbaahinta aftonblodet” Hibo waxay ka sheekaysay sidii ay Iswiidhan uga tagtay iyo waxa ku kalifay xili ay u warantay Expressen.
“5 tii subaxnimo ayaa kasoo kalahay gurigeega qofna ma ogeen waxaan mooday in wax wanaagsan tahay ku hoos noolaashaha kooxda Daacish ” yay ku tiri wariyaha ka socday joornalka Expressen.
Xiliga ay waresyiga bixineysay waxaa ka hoos oonayay wiil yar oo 1 sano jir ah kaasi oo u baahnaa caano sida ay sheegtay waxana dhinac socday dabeyl xoogan madama lagu guda jiray xiliga roobka ee dalka suuriya.
Codsiga Hiba ayaa ku soo aadaya iyadoo wadamo badan oo caalamka ay ka shirayaan xubnaha kooxda daacish ee ka tagay caalamka sidii looga ceshan lahaa dhalashada wadamada ay kasoo jeedan taasi oo lagu kala aragti duwan yahay dalka sweden ayaa kamidah wadamada doonaya in sharciga lagala laabto dadkaasi oo dhibaato u keeni kara dalkooda.
Previous Iswiidhan, Xawaaladaha Soomaalida oo qaarkood laxeray
Next Doowo; Siday u socdaan Doorashooyinka middowga Yurub iyo Iswiidhan